Inona avy ireo antony mahatonga ny rosin joint amin'ny fanodinana chip SMT?
I. Rosin mpiray noho ny fizotran'ny dingana 1. Mametaka solika tsy misy 2. Mametaka apetaka tsy ampy 3. Stencil, fahanterana, famoahana diso II. Rosin mpiray vokatry ny PCB lafin-javatra 1. PCB pads dia oxidized ary manana malemy solderability ...
Ny fitsaboana ambony PCB no lakilen'ny fototry ny kalitaon'ny patch SMT. Ny fizotran'ny fitsaboana amin'ity rohy ity dia misy ireto teboka manaraka ireto. Androany, hizara ny zavatra niainako tamin'ny fanaporofoana taminao aho: (1) Afa-tsy ny ENG, ny hatevin'ny ...
Ny fakan-tsary momba ny tarehy dia mampiasa teknolojia biometrika mifototra amin'ny fampahalalana momba ny tarehy, mampiasa fakan-tsary na fakan-tsarimihetsika mba hanangonana sary na rian-dahatsary misy tarehin'olombelona, ​​mamantatra sy manara-maso ny endrik'olombelona amin'ny sary, ary avy eo manao recognit ...
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny famolavolana PCB amin'ny fizotry ny fametrahana SMT?
Hodinihintsika aloha ny lohahevitray, izany hoe, ny maha-zava-dehibe ny famolavolana PCB amin'ny fizotran'ny patch SMT. Mifandraika amin'ny atiny izay nohadihadiana teo aloha, dia hitantsika fa ny ankamaroan'ny olan'ny kalitao ao amin'ny SMT dia mifandray mivantana amin'ireo olan'ny fizotran'ny any aloha. Toy ny ...
Fampiharana isan-karazany maodely fakan-tsary binocular
Ny tabilao loharano misokatra Firefly RK3399 dia manana fantsom-pifaneraserana MIPI roa-fantsona, ary ny chip RK3399 dia manana ISP fantsona roa, izay afaka manangona mari-pamantarana sary roa amin'ny fotoana iray, ary ny angona roa-fantsona dia mahaleo tena sy mifanitsy tanteraka. Azo ampiasaina amin'ny fahitana stereo binocular, VR ary hafa ...